FAQs - Cuntooyinka Taayirada
Waxa Cunto on Wheels bixisaa waa mid fudud, laakiin aad muhiim u ah: cunnooyinka si fiican loo soo koobay oo la geeyo gurigaaga oo ay la socdaan booqasho iskaa wax u qabso saaxiib. Markii aad Saxiix Cunnada Lugaha, waxaad kaheli doontaa cunnooyinka caafimaadka qaba ee aad rabto adigoo kuhelaya adeegso iyo xulashooyin kuu sahlaya inaad si madaxbanaan ugu noolaato gurigaaga. Eeg tusaalooyinka tusaalaha.
Dhammaan cuntooyinka waxaa loo diyaariyey kuwo cusub oo aan lahayn wax ka-ilaaliyayaal ah waxaana lagu sameeyaa gudaha. Cunto kastaa waxay ka kooban tahay qaybo caafimaad leh oo ay ka mid yihiin entree, khudrad, rooti ama hadhuudh, miro ama macmacaan iyo cabitaan. Waa tan muunad menu.
Maxay yihiin xulashooyinkaaga bixinta? Ma la heli karaa cuntooyin barafaysan?
Marka lagu daro cunnada kulul ee caadiga ah la geeyo Isniinta illaa Jimcaha inta u dhexeysa 11ka subaxnimo ilaa 1da duhurnimo, waxaan sidoo kale bixinnaa cunno qaboojin toddobaadle ah haddii ay adiga kugu habboon tahay. Haddii aad jeclaan lahayd cunnooyinka dhammaadka usbuuca ama ciidaha, cunnooyin dheeri ah oo barafaysan ayaa la keeni karaa inta lagu jiro usbuuca.
Marka lagu daro gaarsiinta cuntada kulul ee joogtada ah Isniinta ilaa Jimcaha inta udhaxeysa 11ka subaxnimo ilaa 1 galabnimo, waxaan sidoo kale bixinaa cunno qabow todobaadle ah. Cunto qabow oo dheeri ah ayaa la keeni karaa inta lagu jiro usbuuca si loogu isticmaalo maalmaha fasaxa ama ciidaha.
Su'aalaha La Weydiiyo ee Ku-deeqaha ah ee Cunnooyinka Lugaha
Haa! Metro Meals on Wheels waa 501 (c) 3 hay'ad cashuur dhaaf ah, taasoo ka dhigaysa deeqdaada boqolkiiba boqol canshuur laga jari karo. Waxaad heli doontaa rasiid markaad dhammaystirto deeqdaada, oo ay tahay inaad u keydiso ujeedo canshuur ahaan.